समाजमा चेतनाको आबश्यकता - Chitwan Online Khabar
७ भाद्र २०७७, आईतवार ०७:२२
चितवन । अहिले बिश्वब्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ अर्थात कोरोना महामारीको यो समयमा समाजमा देखिएको अचेतनाको कारणले गर्दा कोरोना संक्रमित घर परिवारहरु अपहेलित भएर बाँच्नु पर्ने अबस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समाजमा अहिले देखिएको अमानवीय व्यबहारले समाज कसरी रुपान्तरण हुन सक्ला ? यस्तो विषम परिस्थितिमा त सबैको साथ र सहयोग अनि सहकार्य हुनुपर्दछ ।
भनिन्छ प्राणीहरुमा मानिस सर्बश्रेष्ठ प्राणी हो, खै त मानबमा अहिले देखिएको मानबियता यति सबैमा हेक्का होस् ढिलो चाँडो तपाईं हामी सबै एक दिन मर्नु नै पर्छ । अनि किन हामी स्वार्थी भएको आज समाजमा कसैलाई कोरोना लाग्यो भने । के तपाईं हामिलाई भोलि लाग्न सक्दैन र ? अरुलाई जस्तै व्यवहार भोलि तपाईं हामिलाई पनि भयो भने । एकछिन सोच्नुस त ?
फेरि यो रोग लाग्नु कुनै पाप होइन, लाग्दैमा मान्छे मर्छ भन्नु पनि छैन । त्यसैले संक्रमित र संक्रमितका परिवारलाई घृणा होईन, हौसला दिउँ अन्त्यमा, सबै संचार माध्यमहरुले समाजमा सकारात्मक र जनचेतना अभिबृदी गराउनको लागि कोभिड बाट बच्ने र बचाउँने उपायहरु भन्दा पनि कोरोना संक्रमित र संक्रमितका परिवारलाई समाज बाट हुने अपहेलनाका विरुद्ध सशक्त भएर आवाज उठाउन आबश्यक छ । अँध्यारो समाजलाई चेतनाको दियो बाल्नको लागि अब सबै एफ एम रेडियो, टेलिभिजनबाट जनचेतना मुलक रेडियो नाटक एबम संदेश मुलक रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्न आबश्यक छ । अनि मात्र अध्यारो समाजका नागरिकलाई चेतनाको दियो बाल्न सकिन्छ ।
आउनुहोस् तपाईं हामी सबै मिलि समाजमा चेतनाको दियो बालौं, कोरोना संक्रमित र संक्रमितका परिवारलाई घृणा होइन ? हौसला दिउँ कोभिड बाट बच्न, मास्कको प्रयोग गरौं, बारम्बार साबुन पानीले हात धोंउ कोभिड बाट आँफु पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाउँ जनहितमा जारी संदेश